Mohaammad Diksiisoo Gaafachuun Maalif Yakka Ta’e? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMohaammad Diksiisoo Gaafachuun Maalif Yakka Ta’e?
Mohaammad Diksiisoo Gaafachuun Maalif Yakka Ta’e?
Jimaata Kaleessa Gaafa 3/7/2023 ALH’tti barataan Yuunivarsiitii Jimmaa tokko Mohaammad Diksisoodha laaqana geessuf gara Waajjira Poolisii Aanaa 2ffaa Magaalaa Jimmaa deemee ture.
Sana booda Poolisiin baraticha tursiisuudhaan kaninni ittiin jedhe,
1. Eenyutu si erge?
2. Maallaqa eessaa fuute?
3. Ati maal isaati?
4. Maaliif nyaata geessitaaf?
5. Atiifi dhalataa [(naannoo sanaa)….jecha Poolisichi fayyadame fokkataa waan taheef akka cuftuu keessa jirutti gulalameera] fi Caasaa Jawaari” Jechuun Waajjira Poolisiitirraa gara Waajjira Poolisii Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fidanii hiraarsaa oolani.
Bilbila harkaa barataan kun qabatee ture harkaa fuudhanii ni qoranna jechuun ajaja Mana Mutiin isaan angessu tokko osoo hin qabaatin heeyyama isaatiin ala mirga dhuunfaa (the right to privacy) isaa sarbuun keessa seenanii sakatta’aa erga oolanii booda, bilbila keessaa waan barbaadan dhabanii hanga halkan keessaa sa’aatii 2:00’tti tursiisanii gad-dhiisani.
Mirga hidhamaan tokko firaa fi aanteedhaan daawwatamuufi nyaata argachuu dhorkuunis seer-maleessummaa abbootiin irree calaqqisiisani dha. Mohaammad Diksiisoo gaafachuun maalif yakka ta’e? Akeeka siyaatiif jecha seeran ala waan hidhameefi. Sababni biraa hin jiru. Mohaammad mataa isaa, hidhamtoota siyaasaa hiikaa, Jawaar Mohaammad’faa hiikaa, haqni Haacaaluu haa bahu jedhee mirgasaatti fayyadamee waan dubbateef hidhame.
Ergaan nuti Poolisoota kanneenif qabnu, yeroo darbuuf jettanii hammeenyummaa yeroon hin daangofne raawwachuun seenaa borii keessan hin balleessinaa jenna.
Leencoo Lataa Adaamaa galamaa hootelaa Ayu jedhamu keessatti seenaa Itoophiyaa barsiisa jira! Nama waaqni qaqaa irraa diggaate! Dhabbati “I for Change ” jalqaba irraa kaasne hordofaa akka tureeti kana qabsoo bilisummaa Oromoo diguun mooraa qabsoo itoophiyaaf hundeessaan ta’u dhageenye jira.